အာဖဂန်နစ္စတန်၌ တိုက်ခိုက်မှုမှာ အမေရိကန်ကို သတိပေးခြင်း ဟုဆို - Yangon Media Group
အာဖဂန်နစ္စတန်၌ တိုက်ခိုက်မှုမှာ အမေရိကန်ကို သတိပေးခြင်း ဟုဆို
ဝါရှင်တန်၊ အောက်တိုဘာ ၂၁
တာလီဘန်တို့က အမေရိကန် တပ်မှူးများအား ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း တိုက်ခိုက်နေခြင်းမှာ ကြာရှည် နေသည့်စစ်ပွဲမှ အမေရိကန်တပ်များကို ကယ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားနေသည့်ထရန့်အစိုးရ၏ အထင်ကြီး စရာလုပ်ငန်းများအပေါ်တွင် လုံးဝသတိပေးလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း အေပီသတင်းက အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်က ပြောကြားလိုက်သည်။ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်က တိုက်ခိုက်မှုတွင် ကြည်းတပ်ဗိုလ် ချုပ်ကြီး စကော့မီလာသည် ထိခိုက် မှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ လွတ်မြောက် သွားခဲ့သည်။
အောက်လွှတ်တော်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲစီမံထားသည့်အတိုင်း အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်တွင် ကျင်း ပသွားမည်ဖြစ်သည်။ အစိုးရနှင့် အမေရိကန်တို့က ဆုံးဖြတ်ချက်မ ပြင်ဟု ပြောခဲ့ကြသည်။ မိမိတို့က အာဖဂန်နစ္စတန်ဦး ဆောင်သည့် အာဖဂန်ပြန်လည် ပေါင်းစည်းရေးကတိကို လုံးလုံး လျားလျား ကတိအတိုင်းလုပ် ဆောင်သွားမည်ဟု ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဂျိမ်းမက်တစ်က စင်ကာပူ လုံခြုံရေးအစည်းအဝေး၌ အလွတ် သဘောပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုအခါ ရွေးကောက်ပွဲလုပ် နေပြီး အာဖဂန်လူထုကို မိမိတို့ ဆက်လက်အကာအကွယ်ပေး သွားမည်ဟု ¤င်းကထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် တိုက်ခိုက်သော အချိန်သည် အမေရိကန်ရည်မှန်း ချက်နှင့် ပိုဝေးအောင်လုပ်ဆောင် ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ယခုအခါ တာလီဘန်နှင့် အာ ဖဂန်အစိုးရတို့အကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးဖြစ်အောင် ညှိနှိုင်းလျက် ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ၁၈ နှစ်ကြာ ပြည် တွင်းစစ်ပြီးဆုံးစေရန်ဟု ဆိုသည်။ အိုဘားမားအစိုးရကဲ့သို့ ထ ရန့်အစိုးရကလည်း ဤကိစ္စကို လုပ်ဆောင်လိုသည်။ တာလီဘန် တို့ကလည်း အမေရိကန်စစ်တပ် များ အာဖဂန်မှရုပ်သိမ်းရန် ပြော လျက်ရှိကြောင်း ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီကာကွယ်ရေးအကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်က ပြောခဲ့သည်။ မီလာအား ပစ်ခတ်မှုပြီးနောက် အာဖဂန်အရာရှိများနှင့် တွေဆုံ သောအခါ အမေရိကန်ကြည်းတပ် ဗိုလ်မှူးကြီး ဒေးဗစ်ဘတ္တလာက တာလီဘန်တို့ပစ်ခတ်သည်မှာ ကန်ဒါဟာပြည်နယ်ရဲချုပ်အဗ္ဗဒူရာဇစ် ဖြစ်ကြောင်း၊ အရာရှိသုံးဦးတွင် တစ်ဦးသေဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဤကိစ္စဖြစ်ပြီး နောက် မီလာက တာလီဘန်တို့ ဆွေးနွေးလိုသည့်အချက်ကို သံသ ယရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်က တာလီဘန် ကို ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မဲဆွယ် ခဲ့ကြောင်း၊ ယခု ဗိုလ်ချုပ်တစ်ဦး တိုက်ခိုက်ခံရသော်လည်း အမေရိ ကန်က ၎င်း၏သဘောထား မပြောင်းဟု ပြောခဲ့သည်။ ယခုတိုက်ခိုက်မှုမှာ အမေရိ ကန် ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းစေ ချင်လို့လား၊ တာလီဘန်တို့၏ တိုက် ခိုက်ရည်ကိုစမ်းသပ်တာလားဆို သည်ကို စဉ်းစားစရာဖြစ်နေသည် ဟု ဆိုသည်။ အမေရိကန်၏ အာဖဂန်ဆိုင် ရာသံအမတ်သစ် ဇယ်လ်မေခါလီ ဇက်က တာလီဘန်နှင့် အာဖဂန် သမ္မတ အရှက်ဖ်ဂါနီအစိုးရတို့ တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးရန် အမေရိကန် က လုပ်ဆောင်ပေးသွားမည်ဟု ပြောခဲ့သည်။
မုန်တိုင်းငယ် သတင်းကြောင့် သီတင်းကျွတ် ပိတ်ရက် ကမ်းခြေခရီးစဉ်နှင့် ဟိုတယ်ကြိုတင်အမှာ ဖျက်
ရန်ကုန် ၁၁ မြို့နယ်အတွင်း အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ် လမ်းကြောင်းနှင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု မရှိပါက ဆန??
အားလုံး မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်၊ ဖားကန့်က အဖြစ်အပျက်တွေကို အားလုံးကို ချပြချင်တဲ
ရိဒ်နယ်စပ် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ် လိုက်သော်လည်း မြန်မာဘက်မှတင်ပို့သည့် ကုန်စည်အများစု အရောင်းအ?
ဝင်းဂါး ဆက်ရှိပါက အာဆင်နယ်ကို စွန့်ခွာဖြစ်မည် မဟုတ်ဟု ဝီလ်ရှိုင်းယား ဆို